SAWIRRO+XOG: Xildhibaano & Wasiiro ka tirsan Puntland oo saldhig ka dhigtay Tukaraq & Xogo banaanka u soo baxaya – Puntlandtimes
SAWIRRO+XOG: Xildhibaano & Wasiiro ka tirsan Puntland oo saldhig ka dhigtay Tukaraq & Xogo banaanka u soo baxaya
March 24, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com ayaa ogaaday in wixii ka dambeeyey 13 March 2018, ay jirtay kala aragti duwanaansho xoog badan oo soo kala dhexgalay xildhibaano, Wasiiro & Madaxtooyada Puntland, kaas oo ku saleysan xaaladda deegaanka Tukaraq oo ay kal hore qabsadeen ciidamada Somaliland, ilaa haddana aysan jirin talaabo ay qaaday dawladda, marka laga reebo abaabul dagaal.
Xildhibaano & Wasiiro ka soo jeeda deegaanada ay haysato Somaliland ayaa ka carooday markii ay maqleen wararka sheegaya in ay Puntland qaadanayso qaraar ku aadan arrimaha siyaasadeed ee hadda ka taagan gudaha dalka, gaar ahaana mashaariicda DP WORLD oo uu maamulka Puntland qorsheynayo in ay taageeraan sii shaqeynta shirkadan.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Eng CabdiXakiim Cumar Camey oo kasoo jeeda deegaanadan ayaa ka carooday in xiligan laga hadlo arrimaha Muqdisho ka aloosan, iyadoo aysan dawladdiisu wali talaabo ka qaadin ciidamada Somaliland ee qabsaday deegaano hor leh, halistana ay tahay in la qaato talaabo kale.
Talaadadii lasoo dhaafay kala qeybsanaan xoog badan ayaa laga dhex arkay kulanka Golaha Wasiirada ee aan caadiga aheyn, markii inta badan golaha Wasiirada ee kasoo jeeda gobalada Sool, Sanaag & Cayn ay u codeeyeen in la raaco qaraarkii baarlamaanka Faderaalku ku mamnuucay DP WORLD, taasi waxay banaanka soo dhigtay waxyaabo badan oo huursanaa.
Xaaladda Tukaraq oo horeyna aragti ahaan la xaqiijiyey in lagu kala qeybsanaa ayay arrimahan soo kiciyeen, waxaana wararku sheegayaan in taasi ay kaliftay in xubnaha Wasiiradda, Xildhibaanada ah ee kasoo jeea deegaanada Sool ay ka baxaan magaalada Garoowe oo ay habeenkii 2aad u hoydeen deegaanka Fararyaale ee gobalka Sool oo masaafo yar u jira magaalada Tukaraq oo ay haysato Somaliland.
Mid kamid ah Xildhibaanada baarlamaanka ee tagey labadi habeen lasoo dhaafay Fararyaale ayaa u sheegay Puntlandtimes.com in ay arrintan u sameeyeen sidii ay culeys ugu saari lahaayeen Madaxtooyada Puntland in ay qaado weerar dagaal oo lagu wajahayo maamulka la baxay Somaliland, laakiin taasi ayaa ah arrimo ay waajibaadkeeda leeyihiin saraakiisha ciidamada.
Xog badan lagama hayo ilaa hadda shir ka dhacay gurriga Madaxweyne kuxigeenka Puntland Eng CabdiXakiim Xaaji Cumar Camey, kaas oo ay si gaar ah u yeesheen wasiiro, Xildhibaano & Isimo ka soo jeeda gobaladaas, kuwaas oo ay uga hadleen xaaladdaha cusub ee dhanka dagaalka ku saabsan.
Gudoomiye kuxigeenka 2aad baarlamaanka Puntland Xuseen Xaaji Diiriye oo ay la socdaan koox xildhibaano ah ayaa tagaya deegaanka GOD-QABOOBE, halkaas oo ay ku hoydeen habeenkii lasoo dhaafay, waxayna iskaga soo qaadeen sawirro, taas oo ka dhigan in ay ahayd dhuulatus ciidan oo xaaladda sii kiciyey.
Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wuxuu ku dhawaaqay 20 January 2018 in maamulkiisu ay sugi doonaan Amniga xaduudaha, ayna ka hortagi doonaan weeraro kasta oo ay soo qaado Somaliland, wuxuuna xiligaas ahaa waqti xasaasi ah oo ay taagneyd xiisadda deegaanka Tukaraq oo ay qabsatay Somaliland xiligaas.
Falanqeeyaasha siyaasadda ayaa rumeysan in kala aragti duwanaanshaha hadda soo baxay if-baxay ee la xariira DP WORLD, ay ka dhigan tahay faragalin siyaasadeed oo ku dhex jirta Puntland, taas oo ka timid dhinaca magaalada Muqdisho, waxaana la rumeysan yahay in ay jiraan xubno ka tirsan baarlamaanka PL oo saameyn leh, haddana kusugan magaalada Muqdisho, kuwaas oo awood saaraya sidii ay taageero uga heli lahayeen dawladda Faderaalka Soomaaliya.
maamulka puntland dandiisa wuu yaqaan laba nin oon deegaanka dhabta ah ee reer puntland ahaynina siyaasada puntiland ma duwi karaan waxna kama bedeli karaan
labada wasiir ee u codeeyey in ay DPW ku raacaan maamulka dawakhsan ee xamar
waa lagu qoslay alla hadii aad arki lahaydeen labadii wasiir ee midna ugaadhyahanka ahaa midna warsangeli cumarka ahaa wixii ku dhacay iyo sidii loogu qoslay iyo bahdilaadii ka raacay ragan o hoyday god qaboobe waa niman ciil halkaa geeyey goaankooduna waa sidii ay u soo xera gelin lahaayeen somalilnd saacad saacad bayna u wada hadlaan dhnaca kale.
warku wuu cadyahay ee waxa layaab leh dadkan dagaal ay kaga hadhay, somaliland waxay noqon doontaa meesha dheregta barwaaqa sooranka afrika ama yurubta afrika putlandna way quudaraynaysaa in wax ka soo gaadhaan dhankeeda markaa dalaadala ciyaarta dhaafa ilma caqli yarow
Gaas baa wax kasta masuuliyadeeda leh xamar buuna ku xiran yahay.
Wuxuuna si cad usheegay in aanay ku shaqayn waxa dadku rabaan.
Hadana Emirates iyo itoobiyaba albaabada ayay ka xirteen, farmaajo balantii buu uga baxay musharkii ciidanka ma bixin.
Gaas ilaahaw sanadka iga dhamee buu leeyahay.
KKKKKK Haliye sidaad wax u ogtahay diirka loogama waa siibo
dhabayacadu kaluunkeeda iyo budhcad badednimadeeda way yaqaanaan si a u noolaadaan ee lakin hadalkaagaasi wuxuu gubayaa kuwa dhabayaco martida u ah
FUTO GARAD, WAXAAN ORAN JIRNEY ADIGOO KALE MARKAAN ARAGNO FUTOOY WAA GUS kkkkk bari tol u sidee waa ragii blue make up